Thursday January 03, 2019 - 12:01:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha wadanka Tajakistan ayaa xarigga ka jaray biya xireenka ugu weyn caalamka oo dhowaan wadankaasi laga hirgeliyay in kastoo khilaaf xooggan uu ka taaganyahay.
Biya xireenkan waxaa laga dhisay gobolka Raanguun ee dhaca waqooyiga wadanka Tajakistan waxaana loogu magac daray isla gobolka Raanguun.
Saciid Shamsullaah oo ah Injineerka qaabilsan dhismaha biya xireenkan ayaa sheegay in ay soo gaba gabeeyeen wajiga koowaad ayna bilaabeen in ay ka shaqeysiiyaan toorbiinaadka ugu muhiimsan balse ay harsanyihiin qaar kamid ah toorbiinaadkii loogu talagalay in ay korontada ugudbiyaan wadamada dariska ah.
Dowladda Tajakistan waxay sheegtay in marka lagaaro sanadda 2028 ay bilaabayso in korontada ay dibadda udhoofiso balse hadda ay ku mashquulsantahay sidii Korontada loo gaarsiin lahaa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka.
Shacabka Tajikistaan ayaa 70% ku sugnaa xaalad Koronto la'aan ah muddo Afartan sanadood ah tan iyo markii gummeystihii ruushka uu wadankaasi qabsaday.
Waxaa jira cabasho xooggan oo dowladda Ozbakistan ee dariska la ah Tajakistan ay ka muujisay biya xireenka Raanguun oo ah midka ugu weyn caalamka wuxuuna dhirirkiisu gaarayaa 335 Mitir.
Madaxweynaha Ozbakistan ayaa sheegay in biya xireenkan uu nuqsaamin doono biyaha wabiga weyn ee labada dal kala qeybiya balse Tajakistan ayaa niyadda ugu dajisay in wax dhibaata ah aysan ka imaan doonin biya xireenkan.